Wiil Soomaali ah oo Kelidiisa Laga Soo Saaray Todoba Boqol oo Dhagax yar yar ah – Balcad.com Teyteyleey
Nin Soomaali ah oo ka yimid magaalada Gaalkacyo ayaa caafimaad u tagay dalka India, dhakhaatiirta Isbitaal gaar loo leeyahay oo dalkaas ku yaalla ayaa mid ka mid ah keliyihiisa laga soo saaray 700 oo dhagxaan aad u yaryar.
Dhakhaatiirta ayaa sheegay in ninkan oo magaciisa ay sheegeen Cabdiraxman uu la daalaa dhacayay cudur ay dhif iyo naadir tahay in la arko qof qaba maadaama keliyahiisa ay dhagxaan quruurax ah soo saaraan.
C/raxmaan, ayaa dhakhaatiirta u sheegay in muddo sanado ah uu hayay xanuunka keliyaha isla markaana uu tagay mid ka mid ah Isbitaalada magaalada Gaalkacyo loona sheegay in keliyahiisa ay ku jiraan dhagxaan yaryar iyo kuwo waa weyn oo aad u tiro badan.
Warkan oo lagu daabacay THE HINDU ayaa waxa ay sheegeen in ninkan muddo sideed bilood ka hor lagaga sameeyay qaliin kelida bidix lagana soo saaray sadex dhagax oo waa weyn, hase ahaatee qaliinkaas kadib caabuq kale ku yimid kaasoo ku faafay kelida midig.
“Tani waa sida xaalkiisu ahaa markii uu noo imaanayay. Kelidiisa bidix ayaa xanuuneysay wax qaliin furan ah laguma sameyn karin. Xaaladiisa ayaa dejinay ka hor inta aan loo diyaarinin qaliinka loo yaqaano (endoscopic surgery) ama qaliinka leysarka oo looga sameeyay kelida dhanka midig,” sidaas waxaa sheegay Dr. V. Surya Prakash kamid ah dhakhaatiirta Isbitaalka Virinchi , oo ah halka qaliinka C/raxmaan lagu fuliyay sadex maalin ka hor.
“Waxaan ka soo saarnay 700 quruurax ah ugu badnaan intii aan arki jirey waxay ahaayeen 100 ama 150 farqi weyn ayaa u dhexeeya waana wax aad loola yaabo,” ayuu yiri Dr. Prakash.
The post Wiil Soomaali ah oo Kelidiisa Laga Soo Saaray Todoba Boqol oo Dhagax yar yar ah appeared first on Ilwareed Online.
Wararkii ugn Danbeeyey: Qatar oo Cunaqabatayn Laga Saaray Xajka & Kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaalaha…